IOS 14: Zonke iindaba esizaziyo- Iindaba ze-iPhone | IPhone iindaba
iOS 14 Uya kungena ezihlangwini zika iOS 13, Inguqulelo yamva nje yenkqubo yokusebenza ka-Apple. Kulindeleke ukuba ibe njalo thaca ngoJuni 2020, nangona ukuza kuthi ga ngoku akukho ziqinisekiso zaseburhulumenteni.
Ngokuhambelana nokuhambelana kwesixhobo, inokufakwa kubo bonke abo bakwaziyo ukuhlaziya kwi-iOS 13. Ke ngoko, inqanaba lokukhutshelwa ngaphandle liya kuba lincinci.
Phakathi kwezinto ezintsha, sinethemba:
Inkqubo entsha yokomelela komzimba, kunye neendlela kunye nevidiyo ezikunceda uphile ubomi obunempilo. Okwangoku akukho zimpawu zibonisa ukuba esi sicelo sihlawulwe, ke siyathemba ukuba ukusetyenziswa kwaso simahla kubo bonke abasebenzisi.
Imisebenzi emitsha kwiMiyalezo, Oko kubandakanya ukubanakho ukukhankanya abanye abasebenzisi (@user) kunye nokucima imiyalezo esele ithunyelwe.
Okwangoku kukho ulwazi oluncinci malunga nalo, kodwa siza kukwazisa ngokuqhubela phambili kweendaba onokuthi ubone ngezantsi.
I-Apple ithi isigqibo sokuhlaziya i-iOS 14 sesokwexeshana
por UIgnacio Sala yenzayo Iinyanga ze5 .
Kwiveki ephelileyo, i-Apple ibhengeze ukuba iyayeka ukuhlaziya i-iOS 14 ukothuka komntu ngamnye…
I-IOS 14.8.1 ngoku iyafumaneka kubasebenzisi abangahlaziywanga kwi-iOS 15
por UIgnacio Sala yenzayo Iinyanga ze8 .
Ngosuku emva kokukhululwa kwe-iOS 15.1 kunye ne-iPadOS 15.1, abafana baseCupertino bakhuphe uhlaziyo olutsha ...
I-iOS 15.1 ayizisombululi iingxaki zebhetri yee-iPhones ezindala
por UMiguel Hernandez yenzayo Iinyanga ze8 .
I-iPhone kwiinguqulelo zayo zangaphambili, ngakumbi i-iPhone 12 kunye ne-iPhone 11, ibonise iingxaki ezinzulu zokuzimela ...
I-Apple iyeka ukusayina i-iOS 14.8
por UIgnacio Sala yenzayo Iinyanga ze9 .
Njengesiqhelo, iApple ilandela umthetho olandelwayo wokuyeka ukusayina iinguqulelo ezindala ze ...
Lixesha lokuba uhlaziye! IOS 14.8, i-iPadOS 14.8, ii-watchOS 7.6.2 kunye neMacOS Big Sur 11.6 ngoku ziyafumaneka
por UJordi Gimenez yenzayo Iinyanga ze10 .
Kwiiyure ezimbalwa ezidlulileyo iinguqulelo ezikhoyo ze-iOS 14.8, i-iPadOS 14.8, ii-watchOS 7.6.2 kunye neMacOS Big zikhutshiwe ...
Inguqulelo ye-iOS 14 inokufikelela kuhlobo lwe-14.8 okokuqala kwimbali yesoftware
por UJordi Gimenez yenzayo Iinyanga ze11 .
Iinguqulelo zesoftware yeApple yezixhobo zazo ziyaqhubeka nokutshintsha notshintsho rhoqo kwaye yintoni namhlanje ...
I-Apple iyeka ukusayina i-iOS 14.7
por UIgnacio Sala yenzayo Iinyanga ze11 .
Abafana abasuka eCupertino bakhuphe i-iOS 14.7.1 kwiveki ephelileyo, uguqulelo oluphantse lube lolokugqibela ...
Iingcebiso ze-IPadOS 15 kunye namacebo okufumana okuninzi kuyo
por UMiguel Hernandez yenzayo Iinyanga ze11 .
Ukufika kwe-iOS 15 kuyasondela kwaye kuyasondela, ke akukho nto sinokuyenza ngaphandle ...
Akusekho kwimeko yokwehla uye kwi-iOS 14.6
Kubasebenzisi abaninzi, kubandakanya nam, i-iOS 14.6 ibiyintloko yokwenyani ngokubhekisele ...
IOS 14.7.1 kunye ne-iPadOS 14.7.1 Ikhutshwe ukulungisa i-Apple Watch Error Error
por UToni Cortés yenzayo Iinyanga ze11 .
I-Apple ikhawuleze ukulungisa i-Apple Watch yokuvula ibug. Kuthathe kuphela iveki ukuya ...
Iinkcukacha ze-Apple yintoni entsha kukhuseleko lwe-iPadOS kunye ne-iOS 14.7
por Ingelosi Gonzalez yenzayo Iinyanga ze11 .
Kwiintsuku ezimbalwa ezidlulileyo iApple ikhuphe emva kweenguqu ezintlanu ze-beta i-iPadOS kunye ne-iOS 14.7 yezixhobo ezifanelekileyo. Ii-betas ezipapashiweyo ...